Abavelisi bemaski abakhuselayo kunye nabaThengi-fektri baseChina - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa kunye nokuThengisa iiRhwebo kumazwe angaphandle, Co, Ltd.
Imaski ekhuselayo isetyenziselwa ukukhusela ubuso nentamo kwimichiza yentsimbi ebhabha, igesi eyingozi, iiplashhes ezingamanzi, isinyithi kunye nomgangatho wobushushu obunyibilikisayo obushushu. Kukho ikakhulu iimaski zewelding, imaski echasene nefuthe, imaski echasene nemitha, iimaski zegesi ezinxamnye nomsi kunye neemaski zokufudumeza ubushushu.
Imaski yokhuselo yezonyango inokubathintela ngokufanelekileyo abasebenzi bezonyango ekuchitheni ukungcola ebusweni ebusweni ngexesha lokubonisana nonyango. Kwangelo xesha, imaski yokhuselo lwezonyango inomsebenzi olungileyo wokulwa nenkungu kwaye inika umbono ocacileyo ngonyango. Imaski yokukhuseleka kobuso yonyango yenziwe ngephepha elikhuselayo, isiponji kunye nebhendi ye-elastic, kwaye uhlobo lwesakhelo lwenziwe ngephepha elikhuselayo, isakhelo kunye ne-anti-eye-endlebe yokutsiba. Imaski yokukhuseleka kobuso isetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi eyahlukeneyo yezonyango efuna ukukhusela ubuso bomqhubi.
Imaski yokukhuselwa kwezonyango yenziwe ngamacandelo amathathu: Iphepha lokuzikhusela elibonisa ukungqinisisa, okanye isanti (okanye ibhendi ye-elastic, imaski ebekwe entloko) kunye nesiponji esichasayo; imaski yokulwa inkungu inokubathintela ngokufanelekileyo abasebenzi bezonyango ekufumaneni ukubonisana kunye nonyango I-splashes engcolisayo ebusweni ngexesha lokuhlolwa, kwaye inomsebenzi olungileyo wokulwa nenkungu, obonelela umbono ocacileyo ngonyango. , Le mveliso isetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi yezonyango efuna ukhuseleko lobuso bomqhubi. Le mveliso isetyenziswa kuphela njengokungenelela kwabasebenzi bezonyango ukungcolisa umqhubi. Kuthintelwe ngokungqongqo ukusebenzisa le mveliso ukutshintsha izixhobo zokukhusela ezinjengebhakteriya kunye nezinye izifo ezosulelayo. .
Imaski ekhuselayo IsiNgesi: isigcina-ntloko
Ulwakhiwo lweemaski ezikhuselayo: umzimba we-cap, umngxuma wokulungisa, ocacileyo
Ukusetyenziswa kwemaski ekhuselayo: khusela amehlo kunye nobuso, thintela ukusasazeka kweesisi igesi
Indima yemaski yokhuselo lonyango: ukuthintela ukwanda kwamathe, amadrophu kunye neentsholongwane
Kwimveliso yemizi-mveliso, ubuso babantu buhlala benzakala ngamasuntswana aphezulu, isinyithi, iinyibilikisi ezinamachiza, kunye nokukhanya okuyingozi, kunye nemasks zokhuselo ezahlukeneyo kufuneka zisetyenziselwe ukhuselo.
Zininzi iindidi zeemasks ezikhuselayo, kodwa zinokwahlulahlulwa ngokungalinganiyo ngokweendidi ezine ngokokusebenzisa kwazo: iimaski ezichasene nefuthe, iimaski ezichasene nezinto ezingonakalisi uluthuli, umsi, umsi kunye neemaski zerhasi ezinobuthi, kunye nezihlangu zemitha .
Ngexesha lokusetyenziswa, imaski yokukhusela kufuneka icoceke, ibonakale, kwaye ingabikho ekukhutsheni nasekuboyeni. Unxibelelwano phakathi kwemaski kunye ne-hat rack kufuneka lube luqinile. Imitya yeebhatyi zemikhono kufuneka ilungele uhlengahlengiso, ukuze iqiniswe ngokufanelekileyo, ikhuseleke kwaye ikhululekile ukunxiba entloko. Isinongo sebhabhathane kufuneka sisebenze kakuhle kwaye sinokulungisa imaski kwindawo efanelekileyo ukujongwa.
1. Umzimba we-cap
Umzimba we-cap uphambi kwayo kwaye unendawo ebanzi.
2. Ukulungisa umngxunya
Akukho mingxunya yokulungisa kuwo omabini amacala omzimba, kwaye amazinyo ajikelezayo anikezelwa kumda wemingxunya yokulungisa.
(1) Isandisi entloko
Isangqa sentloko sisembindini, odlala indima yokuthuthuzela intloko.
(2) Ukulungisa isiqwenga
Ukuphela kwesiqwenga sokulungisa kunikezelwa ngenxalenye ebophayo enokuthi ijijeke phambili, indawo ebanjisiweyo inikezwe ngeprrusion, kwaye igreyini ehambelana neprotrusion inikezwe kwisiqwenga sokulungisa.
(3) Ukugqobhoza iindlebe
I-earmuff igxunyekwe kwisakhelo senkxaso, kwaye i-chute ibonelelwe kumda ophezulu we-earmuff, kwaye indawo yokubambisa iyabonelelwa kwi-chute.
1. Imaski yentsimbi
Yenziwe ngefestile yokujonga, isihluzo, iphepha lokukhusela kunye nemaski yobuso, njl njl. Inendawo yokulwa nesixhobo sokukhanya, ukukhanya kobushushu kunye nokusebenza kobushushu. Kukho iintlobo ezininzi zentloko-ezixhonyiweyo, ezezandla, i-mask-half, kunye ne-mask enobuso obugcweleyo 'ezifanelekileyo kwimisebenzi ye-welding ngemitha ye-thermal.
2. Imaski yokuthukisa
Isetyenziselwa ukukhusela ifuthe lezinto eziphaphazelayo, iiplashhes zamachiza ezinamachiza, njl njl, kwaye isetyenziswa kakhulu kwimisebenzi enjengokujika, ukugaya, ukucwangcisa, ukugaya, kunye nokugrumba ilitye.
3. Ubushushu-ubungqina kunye nemaski yemitha
Idityaniswa ngemaski kunye yintloko. Eyona nto isetyenziswa ziikhuselo zokufudumeza zine mesh yensimbi kunye nokuphehla, ezisetyenziswa rhoqo ekunyibilikeni, kwiziko nasekusetyenzisweni kweqondo lokushisa liphezulu.
â 'Jonga onke amalungu kwimaski yokucaca ukukrala, ukuhla, ukukhuhla, okanye inkangeleko engaqhelekanga.
â heKhangela onke amalungu kwimaski yezikrufu ezikhululekileyo okanye iindawo ezizimeleyo.
â '¢ Ngenxa yokuba kukho umsantsa phakathi kwemaski yokhuselo kunye nobuso, iiglasi zokukhusela zingasetyenziswa kunye kunye nemaski yokhuselo.
â '£ xa usebenza ngemaski yokufaka i-welding, ukwenzela ukuthintela iipali ukuba zonakalise umzimba, ungayeki ukuyisebenzisa ihafu.
Xa usebenzisa isixhobo sokugcina umlilo kunye nemaski ebushushu, kufuneka uqinisekise ukuba akukho kukhanya kuyingozi, kwaye ukuba kunjalo, mazisetyenziswe kunye neeglasi ezingenamandla.